အိန္ဒိယ နဲ့ ထိုင်းအပါအဝင် ၄၇ နိုင်ငံကလာရောက်သူတွေ အပေါ် ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက် ဗြိတိန်ရုပ်သိမ်း
FILE - Two tourists stand in front of Buckingham Palace, one of the official homes of Britain's Queen Elizabeth II, in London, March 25, 2021. Britain is ending restrictive quarantine requirements for visitors from 47 countries, starting Oct. 11, 2021.
အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊ တောင်အာဖရိက၊ဘရာဇီး နဲ့ တူရကီ အပါအဝင် နိုင်ငံ၄၇ နိုင်ငံကနေ ဗြီတိန်နိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ စောင့်ကြ့ည်ကန့်သတ်ချက် Quarantine ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ဗြိတိန်နိုင်ံငံက ဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ ဒီနှစ် နွေရာသီ ၂ ခုပေါင်းရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ဝင်ငွေတွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက် အခုလိုလုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် တနင်္လာနေ့ကစပြီး အဲဒီနိုင်ငံတွေက လာမယ့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသား ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ ရောက်ရောက်ချင်း အရင်က သတ်မှတ်ထားသလို ဟော်တည်မှာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး ၁၀ရက် Quarantine ဝင်စရာမလိုအပ်တော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုလံဘီယာ၊ အီကွေဒို၊ ပနားမား နဲ့ ဗင်နီဇွဲလား အပါအဝင် နိုင်ငံ၇ နိုင်ငံက လာမယ့် ခရီးသည်တွေကိုတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး Quarntine သတ်မှတ်ချက်တွေ ဆက်လက်ချမှတ်ထားပါတယ်။
ဗြိတိန်အစိုးရက AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Modern နဲ့ Johnson&Johnson ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးတို့ကို အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ပျံ့ပွားနေတဲ့ ကာလအတွင်း စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုတွေ ပြန်လည်ကာမိစေဖို့အတွက် ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကန့်သတ်ချက်တွေအပေါ်ကို Ryanair နဲ့ Easy Jet လေကြောင်း ကုမ္ပဏီတွေက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အိန်ဒိယ၊ထိုငျး၊ တောငျအာဖရိက၊ဘရာဇီး နဲ့ တူရကီ အပါအဝငျ နိုငျငံ၄၇ နိုငျငံကနေ ဗွီတိနျနိုငျငံကို လာရောကျလညျပတျသူတှကေို ကိုဗဈကပျရောဂါ စောငျ့ကွ့ညျကနျ့သတျခကျြ Quarantine ဝငျရမယျဆိုတဲ့ သတျမှတျခကျြတှေ ဗွိတိနျနိုငျံငံက ဖယျရှားပေးလိုကျပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈနဲ့ ဒီနှဈ နှရောသီ ၂ ခုပေါငျးရဲ့ ခရီးသှားလုပျငနျးက ဝငျငှတှေကေို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီးနောကျ အခုလိုလုပျဆောငျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီအတှကျ တနင်ျလာနကေ့စပွီး အဲဒီနိုငျငံတှကေ လာမယျ့ ကိုဗဈကာကှယျဆေးထိုးပွီးသား ခရီးသှားတှအေနနေဲ့ ရောကျရောကျခငျြး အရငျက သတျမှတျထားသလို ဟျောတညျမှာ စောငျ့ကွညျ့စဈဆေး ၁၀ရကျ Quarantine ဝငျစရာမလိုအပျတော့ပါဘူး။
ဒါပမေယျ့လညျး ကိုလံဘီယာ၊ အီကှဒေို၊ ပနားမား နဲ့ ဗငျနီဇှဲလား အပါအဝငျ နိုငျငံ၇ နိုငျငံက လာမယျ့ ခရီးသညျတှကေိုတော့ ကိုဗဈကပျရောဂါ စောငျ့ကွညျ့စဈဆေး Quarntine သတျမှတျခကျြတှေ ဆကျလကျခမြှတျထားပါတယျ။
ဗွိတိနျအစိုးရက AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Modern နဲ့ Johnson&Johnson ကိုဗဈကပျရောဂါ ကာကှယျဆေးတို့ကို အသိအမှတျပွုထားပါတယျ။
ဗွိတိနျနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါ ပြံ့ပှားနတေဲ့ ကာလအတှငျး စီးပှားရေးဆုံးရှုံးမှုတှေ ပွနျလညျကာမိစဖေို့အတှကျ ရှုပျထှေးနတေဲ့ ခရီးသှားလုပျငနျး ကနျ့သတျခကျြတှအေပျေါကို Ryanair နဲ့ Easy Jet လကွေောငျး ကုမ်ပဏီတှကေ မေးခှနျးထုတျခဲ့ကွပါတယျ။
ကိုဗစ်တားဆီးမှုတွေကို ဗြိတိန် ရုပ်သိမ်း